Crops – The Ulwazi Programme
Isithelo sikakwatapeya (avocado fruit) Kunezitshalo ezitshalwayo emakhaya ezidliwayo, ezinye zalezizitshalo ziyashesha ukuthela kanti ezinye ziyephuza. Kunendlela esetshenziswayo uma zitshalwa ukuze zikhule kahle futhi zisheshe zithele. Lapha sizobheka isitshalo esaziwa ngokuthi ukwatapeya noma ukotapeya. Ukwatapeya isitshalo esitshalwa kanye kuphela, lesisihlahla sihlala iminyaka silokhu sithela size sinqanyulwe uma sesingasadingwa umnikazi waso. Isihlahla sikakwatapeya uma sitshalwa kugqunyiswa inhlamvu … Read more